एलजी सी वान ओलेड टिभी नेपालमा - Laltin Media
Home»ट्रेण्डिंग»एलजी सी वान ओलेड टिभी नेपालमा
एलजी सी वान ओलेड टिभी नेपालमा
२०२१ मा रिलिज भएको एलजी सी वान ओलेड (LG C1 OLED) टिभी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको टिभीमध्ये एक हो। लामो समयको प्रतिक्षापछि यो टिभी अन्ततः नेपालमा सार्वजनिक भएको हो । यस टिभीमा सामान्य च्यानल बाहेक युट्युब भिडियोहरू र चलचित्रहरू हेर्ने देखि लिएर केही लोकप्रिय स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा गेमहरू खेल्ने सम्म गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा यसको उपलब्धता र मूल्यको बारेमा कुरा गर्दा कम्पनीले टिभीलाई ४८ इन्च, ५५ इन्च र ६५ इन्चको तीन फरक डिस्प्ले साइजमा लन्च गरेको छ । ५५ इन्चको टिभीलाई मूल्य रु. २,६४,९९० पर्दछ। ४८ इन्चको टिभी रु. २,४३,९९० को मूल्यमा उपलब्ध छ र ६५ इन्चको मूल्य ४,४५,९९० रुपैयाँ रहेको छ। यस टिभीका विशेषताहरु यस प्रकार छन्:
यो टिभी स्लिम, स्लीक र एलजीको सी सिरिजको अघिल्लो टिभीसँग मिल्दोजुल्दो छ। न्यूनतम र पालिश गरिएको डिजाइन कोठाको हरेक कुनामा एकदम सही देखिन्छ। यो नेपाली बजारमा हाल उपलब्ध रहेका अधिकांश प्रिमियम टिभी भन्दा पनि स्लिम रहेको छ।
यो टिभीलाई अरूभन्दा फरक पार्ने कुरा के हो भने यसमा 4k OLED प्यानल छ। नेपाली बजारलाई हेर्दा हाल नेपाली बजारमा OLED प्यानल टिभी ल्याएको एलजी एक मात्र ब्राण्ड हो ।
एलजी सी वान ओलेडको अडियो प्रणाली प्रिमियम स्तरको छ। यसमा २.२ साउन्ड सिस्टम छ जसको मतलब २ मुख्य स्पिकर र २ सब-वुफरहरू छन् जसले ४० वाट अडियो प्रदान गर्दछ।
एलजी सी वान ओलेडले चलचित्रहरू हेर्नको लागि सामान्य टिभीको रूपमा मात्र काम गर्दैन । यसले गेमिङ मनिटरको रूपमा काम गरेर उपयोगितालाई बढाउँछ। टिभी पछाडि तपाईंले4HDMI 2.1 पोर्टहरू पाउनुहुनेछ जसले राम्रो गेमिङको लागि 120Hz मा 4K समर्थन गर्दछ। त्यहाँ रहेका सबै गेमरहरूका लागि यो टिभीले गेम अप्टिमाइजर सुविधा उपलब्ध गराउँछ जसले तपाईंलाई भिजुअल, अडियो र fps अनुकूलन गर्न मद्दत गर्छ। यसको शीर्षमा, LG C1 OLED TV मा NVedia G-sync र AMD फ्री सिंक छ र यसको प्रतिक्रिया समय मात्र 1ms हो।